Misoro yeNhau, 29 Kubvumbi 2019
Muvhuro 29 Kubvumbi 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kubvumbi 29, 2019
Poita mutauro wakanyanya munyika panyaya yekufukunura kwevamwe vanhu vakaurayiwa munguva yeGukurahundi kuMatabeleland.
Kubvumbi 26, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 26, 2019
Mutungamiri weUganda, VaYoweri Museveni, vanovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo vachikurudzira nyika dzekumadokero kuti dzibvise zvirango zvadzakatemera Zimbabwe.
VaMuseveni Voitirwa Mabiko kuState House Vasati Vavhura ZITF
Mutungamiri wenyika yeUganda, VaYoweri Kaguta Museveni, vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kubvumbi 25, 2019
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reMalaria pasi rose hurumende ichiti huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kuManicaland, uko kwakavhiringwa nedutumupengo nemafashamu eCyclone Idai.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kubvumbi 24, 2019
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoshoropodza zvikuru mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nekukoka kwavakaita mutungamiri weUganda, Va Yoweri Museveni, kuti vazovhura chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino. V
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 23, 2019
Hurongwa hweZimbabwe International Trade Fair hwegore rino hunotanga zviri pamutemo makambani akawanda achiratidza zvigadzirwa zvawo.
Misoro yenhau, Muvhuro, Kubvumbi 22, 2019
Vanhu gumi nemumwe voshaya munjodzi yekubonderana kwekombi nemotokari yemhando yeHonda Fit, kuHeadlands pedyo neMarondera. Vanhue vange vari mukombi ndevekereke yeSungano yeVapositori vanobva kuKarimbika kuUzumba Marambapfungwe.
Kubvumbi 19, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 19, 2019
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zororo reEaster senzira yekuyeuka kufa kwaJesu Kristu, vanhu vakawanda vachinamatira nyika kuti ive nyika inogarika zvakanaka vanhu vachiwana nyore zvinhu zvavanoda mukurarama kwavo.
Misoro yenhau, China, Kubvumbi 18, 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo kuNational Sports Stadium vokurudzira kubatana asi mhemberero dzinokanganiswa nemvura yanaya muguta reHarare nhasi.
Kubvumbi 17, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kubvumbi 17, 2019
Vanhu vakawanda vopihwa mushonga wekudzivirira chirwere chekorera munzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutumupengo nemafashamu eCyclone Idai kuMasvingo neManicaland.
Kubvumbi 16, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 16, 2019
Mitengo yechingwa nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwevanhu yoita chamurambamhuru.
Kubvumbi 15, 2019
Masoja neMapurisa Odzinga Vanhu Papurazi rekuGokwe Achivasiya paMhene
Vamwe vanhu vakagara patsva kunzvimbo yemapurazi eChamagora pedyo neGokwe Centre mudunhu reMidlands vari kugara pamhene mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvapisa nekupunza misha yavo vachinzi vakagara ikoko zvisiri pamutemo.